चिकित्सकीय तर्क : ग’र्भवतीसँग शा’रीरिक स’म्बन्ध राख्ने कुन समय उपयुक्त ? – Sanjal Nepal
Homeस्वास्थ्य /जिबनशैलीचिकित्सकीय तर्क : ग’र्भवतीसँग शा’रीरिक स’म्बन्ध राख्ने कुन समय उपयुक्त ?
December 25, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 6755
काठमाडौं । सबै ग’र्भवती महिलाहरु पेटमा गर्भ बसेको समयमा निकै स’तर्कता अपनाउछन् । त्यस्तो अवस्थामा सामान्य चो’ट लाग्दा पनि बच्चा खे’र जाने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसकारण महिलाहरु विषेश सा’वधानी अपनाउन चाहन्छन् । त्यहि कारण हुनसक्छ अधिकांश महिला एवं पुरुषहरु ग’र्भवती रहेको समयमा शा’रीरिक स’म्पर्क राख्न चाहदैनन् ।कतिपयले महिला ग’र्भवती भएको तीन महिनापछि शा’रीरिक स’म्पर्क गर्नु हुन्न भन्छन् । तर, मेडिकल साइन्स उक्त मान्यतासंग सहमत छैन । चिकित्सकका अनुसार ग’र्भवती भएको बेला महिलाको श’रीरमा हर्मोनहरु अदल बदल भइरहेको हुन्छ । यो अवस्थामा महिलालाई शा’रीरिक सुखभोगको भोक बढी हुन्छ । कतिपय महिलाहरुले ग’र्भवती हुँदा गरिएको शा’ररीक स’म्पर्कमा बढी आनन्द प्राप्त गर्दछन् ।
चिकित्सकका अनुसार शा’रीरिक स’म्पर्क केबल एकछिनको रमाईलो मात्रै हैन । श्रीमान श्रीमतीविच नजिक हुने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । यो अवस्थामा महिलाको शरीरमा र’क्तसञ्चारको गती बढी हुन्छ त्यसकारण पनि महिलाहरुले यस्को आनन्द बढी लिन्छन् ।चिकित्सकको भनाई अनुसार ग’र्भवती महिलासंग जुनसुकै समयमा पनि शा’रीरिक स’म्पर्क राख्न सकिन्छ । अवश्य पनि सम्पर्क राख्नका लागि दुई जना नै तयार हुनुपर्छ । तपाँईले आफ्नो जीवनसाथिसँग शा’रीरिक सुख खोज्दै हुनुहुन्छ तर साथि तयार छैन भने त्यस्तो सम्बन्धले दिर्घकालीन असर गर्ने कतिपयको बुझाई रहेको छ ।
December 29, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 5083
November 2, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 8500
December 23, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 2520
आजभोलि विवाहित महिलामाथि अन्य पुरुषहरूले आँखा लगाउनु साधारण नै भइसकेको छ हामीले यस्तो घटना देख्दै सुन्दै पनि आइरहेका छौँ आखिर किन पुरुषहरूले आँखा लगाउँछन् त विवाहित महिलालाई जान्नुहोस् कारणयदि कुनै विवाहित महिला आफ्नो सबै काम
LEX 18 agenda conversation: Job club (445178)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (418741)
Hello world! (346051)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (318843)